Zvekutengesa Zvivakwa HVAC Solution
Muchikamu chekuvaka chemabhizimusi, kudziyisa kwakanaka uye kutonhodza haisi kiyi chete yekugadzira mushandi uye nharaunda-inoshamwaridzika nevatengi, asiwo kuchengetedza mitengo yekushandisa inokwanisika. Kunyangwe ari mahotera, mahofisi, masupamaketi kana chimwe chivakwa cheveruzhinji chekushambadzira chinofanirwa kuve nechokwadi chekuenzana kwekupisa kana kutonhora kwekuparadzira, pamwe nekuchengetedza mweya wakanaka. Airwoods inonzwisisa izvo chaizvo zvinodiwa zvechivakwa chekushambadzira uye inogona kugadzirisa mhinduro yeHVAC kune chero gadziriso, saizi kana bhajeti.
HVAC Zvinodiwa Zvekutengesa Chivakwa
Chivako chemahofisi nenzvimbo dzekutengesa dzinogona kuwanikwa muzvivakwa zvehukuru hwese uye maumbirwo, imwe neimwe iine matambudziko ayo pazvinouya kuHVAC dhizaini nekuisirwa. Chinangwa chekutanga munzvimbo zhinji dzekutengesa ndechekugadzirisa nekuchengetedza tembiricha yakasununguka yevatengi vanouya muchitoro, nzvimbo yekutengesa yakanyanyisa kupisa kana kutonhora zvakanyanya inogona kuratidza kukanganisa kune vatengi. Kana zviri zvekuvaka hofisi, saizi, marongero, huwandu hwemahofisi / vashandi, uye kunyangwe zera rechivakwa rinofanira kuyera muyeti. Yemukati yemhando yemhepo chinhu chakakosha kufunga nezvacho. Sefa yakakodzera uye kufefetedza kwakakosha pakudzivirira hwema uye kuchengetedza hutano hwekufema hwevatengi nevashandi. Dzimwe nzvimbo dzekutengesa dzinogona kuda 24-7 tembiricha mutemo mukati mechivako kuchengetedza kushandiswa kwesimba panguva dzenzvimbo dzisina kugarwa.
Isu tinopa matsva, anoshanda, akavimbika masisitimu eHVAC kusangana nemukati memhepo mhando. Zvakare kuchinjika, uye yakaderera ruzha mazinga anodikanwa kune zvivakwa zvehofisi nenzvimbo dzekutengesa, uko kunyaradzwa uye kugadzirwa zviri zvakakosha. Kune HVAC dhizaini dhizaini, isu tinotarisa zvinhu zvakadai sehukuru hwenzvimbo, zvivakwa zvazvino / zvishandiso, uye huwandu hwemahofisi kana makamuri anotarisirwa ega. Tichagadzira mhinduro inogadzirirwa kupa kwakanyanya mashandiro tichichengeta simba rekushandisa mashandisirwo. Tinogona zvakare kushanda nevatengi vedu kuvabatsira kuti vasangane neyakaomarara zvemukati zvemhando yepamusoro mweya. Kana vatengi vachida kupisa kana kutonhodza nzvimbo chete panguva yebhizinesi maawa, tinogona kukuchengetera mari pamagetsi ako emagetsi nekupa smart control system kuti ikubatsire kugadzirisa iyo yekudziya uye yekutonhodza purogiramu yenzvimbo yako, kunyangwe kuchengetedza tembiricha dzakasiyana dzemakamuri akasiyana.
Kana zvasvika kune HVAC yevatengi vedu vekutengesa vekutengesa, hapana basa rakakura kwazvo, diki kana rakaomarara. Iine anopfuura makore gumi echiitiko, Airwoods yakavaka mukurumbira semutungamiri weindasitiri mukupa yakagadziriswa HVAC mhinduro dzemakero akasiyana emabhizinesi.
Dubai Yekudyira DX Coil AHU
Mongolia Musangano Wepamhepo Kubata Chikamu
Telford, UK Inodzorera AHU